ယောဟန်အောင်: လွမ်းလိုက်ရတာ.. လိုဆိုရဲ့သီချင်း
ချစ်သူတွေ၊ မိသားစုတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝေးနေနိုင်ကြတာပေါ့။ ကျနော်လည်း ဒီတဆောင်းမှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် တောင်ပံ ဖြတ်ခံထားရ၊ မိသားစုနဲ့ ဝေးနေရချိန် လိုဆိုရဲ့ သီချင်းကလေးကိုပဲ နားထောင်နေမိတယ်။ အိမ် ကို ပြန်ချင်နေပြီ။ လိုဆိုရဲ့ အသံဟာ ဒဏ်ရာနဲ့ နာကျင်နေတဲ့ ကျားတကောင်လိုပဲ။ ကျနော့်ကိုလည်း ကိုက်စားနေတယ်။
လွမ်းလိုက်ရတာ (ဆက် လိုဆို)
sek loso - ngow kid teung raw
မင်းကိုငါ သိရအောင် ပြောပြချင်ပါရဲ့ကွယ်
ငါ့ဘ၀မှာ မင်းပဲ ရှိခဲ့ပါရဲ့
ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ အတူနေခဲ့ကြတယ်။ နာကျဉ်ခဲ့ရတယ်။
မသိတတ်တော့ဘူး။ ဘယ်အချိန် ပြန်လာလိမ့်မယ် ဆိုတာ
မင်းက ငါ့ကိုလှည့်စားဖို့ လုပ်ခဲ့တာလား။
ခစ် ထိန် ထေ... ကျွန် ကျ ဘ တိုင်
အခု သူ့ကို လွမ်းနေရတာလည်း ရူးပြီးသေလောက်ရဲ့
ခစ် ထိန်း ကျွန် ဟူဝါးကျိုင် စလိုင်
ငါ့ လွမ်းနေရတာလည်း နှလုံးသားတွေ အရည်ပျော်တော့မယ်
ခစ် ထိန် ထေ ကင်.. နွံ မိုက်တိုင်း
ငါ လွမ်းနေရတာလည်း စားမ၀င် အိပ်မပျော်
ဘယ်အချိန် ပြန်လာမယ်လဲ မသိပါဘူး။
Posted by Yaw Han Aung at 10:10 PM
Zawgyi font users: ask yourself
Are you an ethnic cleanser ? andaTHIEF ?
Are you destroying the cultures, languages of Mon,Shan,karen,Kayah etc.,?
You might have blood in your hands. or get caught with stolen goods.
Read about Zawgyi font at http://tr.im/mnh8 how Zawgyi font deliberately abuse
our brothers' culture and languages .(stole spaces reserved fro Mon,Shan,Kayah, Karen etc.,).